Hlala Endlini yesihlahla noma umise itende - I-Airbnb
Hlala Endlini yesihlahla noma umise itende
French Creek, West Virginia, i-United States
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Shirley
U-Shirley Ungumbungazi ovelele
Woza ulale phakathi kwezihlahla futhi uchithe izinsuku zakho uzingela kanye/noma ugibele intaba endaweni engamahektha angaphezu kuka-130! indawo enhle yokuletha ubaba wakho ukuze azokuzingela angakwazi ukuqhubeka evutha umlilo ngenkathi uzingela uzobona isiqinisekiso senyamazane-kusuka engilazini eslayida emnyango isibhamu esikhulu. uzobona okungaphezu kwakho jan 20/2020 manje enza isiraphu eze ezobona ukunambitheka
Akukho muntu kuzo zonke ihlathi kuphela umsindo mhlawumbe indiza ayinazo imigwaqo noma indlu, phakathi kwekhilomitha elilodwa nezilwane ezifuywayo ezicashile wamukelekile ngicela ube namakhreyithi namaphedi wokuchama. Ungashiyi izilwane ezifuywayo zingagadiwe
5.0 · 217 okushiwo abanye
Hlola ihlane elimangalisayo futhi uvakashele iBhuloho Lemvelo elinempophoma ebabazekayo! Ungakwazi futhi ukuvakashela i-West Virginia Wildlife Centre, enikeza izinkambo zokuhamba kusukela ngoMeyi kuya ku-Okthoba (ukuze utholakale ngokugcwele, hlola ku-inthanethi). Idolobhana laseBuckhannon nalo liqhele ngemizuzu engama-30 futhi linikeza izindawo zokudlela nezinketho zokuzijabulisa ezahlukahlukene! I-Weston ine-trans allegheny Lunatic asylum enohambo oluqhele ngamaminithi angu-45
Sicela ukhululeke ukuza kithi nanoma yikuphi ukukhathazeka okungase kuphakame. Singabantu abanobungane kakhulu futhi sihlose ukujabulisa! Jan 24 manje okwenza isiraphu ye-maple uze uzobona ukunambitheka
UShirley Ungumbungazi ovelele